Malaysia - Petronas Ụlọ nche - 1aviagem.com
Gara aga post: Ndụmọdụ - Malaysia - Batu Caves
Nkwupụta ọzọ: Singapore na ihe nzuzo n’azụ 500 dollars gum
Edebere 1 December 2018 site Römulo Lucena
Ịga Kuala Lumpur na ịga eleta Petronas dịka ịga Rio de Janeiro na ịgaghị Cristo Redentor, ma ọ bụ gaa Paris ma ghara ịga Ụlọ Eiffel. Ya mere, m ga-agwa gị ntakịrị ihe banyere akwụkwọ ozi a sitere na Malaysia.
Otu esi enweta ebe:
Ụzọ kachasị mfe ị ga-esi gaa na Petronas Towers bụ site na metro. O kwere omume ịpụ na KLCC ọdụ dị n'okpuru ụkwụ abụọ nke ụlọ elu abụọ ahụ. (Na na ụzọ ụgbọ oloko na-ekwu okwu Malay na English, na mgbakwunye na-egosi ihe ịrịba ama nke oge. N'ihi ya, ọ dị mfe na-esi. Ụzọ ọzọ bụ na-abata ụgbọ ala ma ọ bụ taxi (ma ọ bụ über).
Nkwado m na-eme bụ ịzụta tiketi mbụ. na weebụsaịtị nke aka ya Petronas Ụlọ ebe a. Ihe kpatara ya dị mfe, enwere oke tiketi maka ire ere ma ọ bụrụ na ị na-aga ịzụta n'oge, enweghi ike ịnweta n'ụbọchị ahụ, ma ọ bụ naanị nwere oge ọzọ. Ya mere ọ bụrụ na ịzụta tiketi mbụ ahụ na-eme ka ọ dị mfe ịhazi.
Tiketi ahụ na-enye ohere inweta mbara igwe, nke bụ 170 mita si n'ala. (Erughị ọkara size nke ụlọ. The echiche e nwere ugbua nnọọ mmasị. Ọ na-emechi n'agbanyeghị na nza nke iko n'ebe nile n'ihi na futuristic imewe. Mgbe nke a ị laghachi mbuli inwe na 86 n'ala. Iji banyere 450m n'ala, ma ọ bụ kpọmkwem 451,9 mita 86 n'ala. All a ziri ezi e nyere maka ụlọ ama ndị kasị ibu n'ụwa mgbe ọ na e wuru na ruo afọ ụfọdụ. Taa bụ adịghị ọbụna n'etiti ndị kasị 10. Cheta na elu ụwa bụ ugbu a na Burj Khalifa na 828 mita (fọrọ nke nta abụọ).
Ma, ka anyị kwuo banyere ihe dị mkpa. Echiche sitere na ala iri asatọ na isii. (n'ala 86) bụ ezigbo ihe! ị nwere ike ịhụ obodo ahụ dum. Ọ bụrụ na ị nweta ọdịda anyanwụ ị ga-enwe echiche dị egwu. Ma ọ bụrụ na ọ bụ n'abalị, ị ga-enwe ike ịhụ ọnwa ọzọ na hehe. Obodo na abalị nwere amara, ma ọkụ nke ụlọ ahụ kwụsịrị echiche. Dị ka ihe gbasara ọchịchọ ịmata ihe, ana m ekwu na Petronas dị ka Petrobrás si Malaysia. Ee, ọ bụ ụlọ ọrụ mmanụ. Ụdị ụlọ ahụ bụ nnukwu M nke na-anọchite anya Malaysia. Skybridge (etiti ala) na-anọchite anya mmiri nke jikọtara oge gara aga na ọdịnihu nke mba ahụ, n'eziokwu, imewe ahụ bụ ọdịnihu. Ọ bụkwa nnukwu ibu iji gosipụta mkpa na mpako nke Malaysia na ụwa.
Na azụ na ụzọ ọpụpụ nke elevrị ahụ, e nwere ụlọ ahịa ahịa, tinyere Petronas Lego, ihe mgbaaka, ihe ncheta, wdg.
N'elu ụlọ elu ejima nwere square nke nwere ihe ngosi mmiri n'efu na 20: 00h N'ihi ya, ọ bara uru ịrịgo n'ehihie ma na-ahapụ tupu abalị agagharị. Ogologo mmiri na mmiri gosiri na ị ga-aga ije.
Aro doro anya, ma dị mkpa icheta. Ọ bụrụ na ị na-atụ egwu ebe dị elu, ọ na-akwụ ụgwọ ịbanye n'ebe ahụ ma ghara ịrịgo, ma hụ ogige ugbo na Petronas Ụlọ elu dị n'azụ.
Plus e bụ Aquaria KLCC (otu oge) na na-uru a nleta, ụgha banyere 500 mita si Petronas ụlọ nche na bụ akụkụ nke mgbake na gburugburu ebe obibi akwụkwọ ụlọ ọrụ na a na-elekwasị anya mmiri, karịsịa a nso mmanụ akọwa. Ọ na-agụnyekwa ụdị ndị ọzọ metụtara mpaghara ahụ. Ọ dị ka ma ọ bụrụ na ọ ga-akpọte ndị mmadụ ka ha mara banyere gburugburu ebe obibi. Nnukwu ikwiikwii a n'ubu (nke foto) na-echere nleta gị. Detail, ọ bụ ikwiikwii nke snow nke bụ ụdị na-ebi na tundras, ọ nwere ruo mgbe anụ ọhịa kpuchie.
Aga m anọ ebe a ruo mgbe ọzọ.
Maka ozi ndị ọzọ pịa na map ụwa n'okpuru ebe a.
Olee otú Ọdịnihu Malia Oge gara aga Petronas Petronas Twins Towers